"PR200554en 25/03/2020 CO - Page 58 of 61 - TheMummichogBlog - Malta In Italiano
DATGANIAD I’R WASG GAN GWEINIDOGAETH DROS DREFTADAETH GENEDLAETHOL YR, Y CELFYDDYDAU A’R LLYWODRAETH LEOL
Yn dilyn tasg cydlynol gan yr Adran Llywodraeth Leol o fewn y Weinyddiaeth ar gyfer Treftadaeth Genedlaethol, y Celfyddydau a Llywodraeth Leol a Mita, llwyfan digidol wedi cael ei gyflwyno ac felly fel heddiw, gall y cyfarfodydd llywodraeth leol yn cael eu cynnal ar-lein. Drwy’r llwyfan hwn, bydd y llywodraethau lleol yn gallu cyflawni eu cyfarfodydd heb yr angen am gysylltiad uniongyrchol rhwng cynghorwyr.
Ailadroddodd y Gweinidog José Herrera fod y weinidogaeth, ynghyd â’r Adran Llywodraeth Leol, yn cynnal trafodaethau parhaus ac yn gweithio’n agos gyda’r cynghorau lleol a Chymdeithas Cynghorau Lleol ‘. Mae cyflwyniad y llwyfan digidol yn un o gyfres o fesurau a chamau gweithredu sy’n cael eu rhoi ar waith er mwyn diogelu iechyd gweithwyr, cynghorwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.
Byddai’r weinidogaeth yn hoffi i ddangos ei werthfawrogiad i Gymdeithas Cynghorau Lleol ‘, meiri, cynghorwyr, mae’r ysgrifenyddion gweithredol ac mae eu cymdeithas, yn ogystal â’r holl weithwyr am eu cydweithrediad a’r gwaith parhaus y maent yn ei gyflawni er lles yr Malta a Gozitan cymunedau.
Cinezela Ukhupho ukulungiselela-National Heritage, EZOBUGCISA URHULUMENTE WENGINGQI
Ukulandela umsebenzi ezinxityelelanisiweyo liSebe loRhulumente woMmandla ngaphakathi kwiSebe for the National Heritage, uBugcisa noRhulumente weNgingqi kunye Mita, iqonga yedijithali yazisiwe kwaye kanjalo namhlanje, unako kubanjwa iintlanganiso urhulumente wengingqi online. Ngalo eli qonga, noorhulumente beengingqi baya kukwazi ukwenza iintlanganiso zawo ngaphandle imfuneko ukudibana ngqo phakathi kooceba.
UMphathiswa José Herrera ukutsho ukuba ubulungiseleli, kunye for Local Government iSebe, uyibambile iingxoxo rhoqo kwaye asebenza ngokusondeleyo zamatyala kunye Association Councils Local ‘. Ukuqaliswa neqonga lwedijithali yenye uthotho amanyathelo kunye nezenzo ezithi esetyenziswa ukuze sikhusele impilo abasebenzi, ooceba kunye noluntu ngokubanzi.
Ubulungiseleli angathanda ukubonisa umbulelo ongazenzisiyo kwi Association Councils Local ‘, oosodolophu, ooceba, oonobhala olawulo kunye nonxulumano zazo, kwakunye nazo zonke abaqeshwa ekunokusetyenziswana zabo kunye nomsebenzi ngokuqhubekayo benza ukuze kulungelwe Maltese kunye Gozitan uluntu.
Iidili and Promotion
Shop Namhlanje Iidili, Umbane Iidili, nezaphulelo kuphela-time evela Amazon.com
(Qaphela: Affiliate link)
Ngokusekelwe kwi #Malta enesiqulatho kwi #italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge
Ufuna ukuba umatshini ukuguqulela isiqulatho sakho? Qhagamshelana nathi nge email: mummichogblog@gmail.com
umatshini-iguqulelwe Content yi TheMummiChogBlog
site travel okunikezelwe: centretravel.blogspot.com
23 IZIZATHU abe Catholic
Zukisani Mary, ezele lubabalo nayinyaniso.
INkosi yethu unawe.
Ninoyolo nina phakathi kwabafazi,
kwaye sisikelelwe isiqhamo sesizalo sakho,
OyiNgcwele Mary, uMama kaThixo,
sitandazele tina boni,
ngoku Ngelixa lokufa yethu.
Kutheni imali e Malta?
inkuthazo Special ezinikezelwa ngurhulumente Maltese kubatyali angaphandle
Kukho imithwalo zenkuthazo zoshishino apho Malta uhulumeni kubatyali-mali bamanye amazwe. Ezi ikakhulu ziquka amalungiselelo kwipropati engashukumiyo, mboleko ezithambileyo, iziqinisekiso zemali-mboleko, uncediso-mali-mboleko inzala, amaphepha okusebenza kunye nokunika uncedo noqeqesho. Kwakhona kukho inkuthazo yerhafu ezininzi urhulumente Malta ubonelela kubatyali-mali. Ezi ziquka iikhredithi zerhafu kwi investment. Urhulumente kwakhona ibonelela zotyalo izibonelelo ezifana-50% wokutsalwa kwerhafu kwisityalo noomatshini-20% lotsalo kwizakhiwo zoshishino okanye izakhiwo. Kukwakho inkuthazo kwamathuba emisebenzi kunye nezivumelwano irhafu.
Hlobo: “”https://themummichogblog.com/ ayithathi xanduva okanye uxanduva naziphi na iimpazamo okanye okushiyiweyo kokuqulathwe kweli phepha. Ulwazi oluqulethwe kule sayithi inikwa i “”njengoko kunjalo”” njengesiseko kungekho siqinisekiso ukuphelela, ukuchaneka, ukusebenziseka okanye ukufika … “”
Hlobo: “”Esi sithuba liqulathe lobunikazi izinto ukusetyenziswa leyo akusoloko igunyazisiwe sisigqeba ngqo ngumnini copyright.””